Baro sida loo daryeelo caafimaadkaaga maskaxda maalin kasta | Bezzia
Susana Garcia | 02/05/2021 18:00 | La cusbooneysiiyay 28/04/2021 09:49 | Cilmi-nafsiga, Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha
La caafimaadka maskaxda waa fikrad aad u ballaaran Ma dabooli kartid hal shay laakiin inta badan qof kastaa wuu ogaan doonaa markaad fiicantahay iyo goortaadan fiicnayn. Daryeelka caafimaadkeena maskaxeed wuxuu muhiim u yahay sida loo daryeelo caafimaadkeena jireed, maadaama labaduba si aad ah isugu xiran yihiin, midna maheysan kartid kan kale la'aantiisa. Marka bal aan aragno qaar ka mid ah tilmaamaha si aan u baranno sida loo daryeelo caafimaadka dhimirka maalin walba.
Our caadooyinka iyo nolol maalmeedkeennu waxay si weyn u saameeyaan sida aan nafteenna u helno maskax ahaan. Caafimaadka maskaxda waa in laga taxadaraa maalin kasta si loo gaaro isku dheelitirnaan aan ku dareemeyno wanaag. Taasi waa sababta ay u jiraan waxyaabo badan oo inaga caawin kara inaan caafimaad qabno iyo inaan yeelano maskax xoog badan oo caafimaad qabta.
1 Cunto caafimaad leh
2 Daryeel jirkaaga
3 Daryeel asxaabtaada
4 Waqtiga firaaqada
5 Samee wax aad jeceshahay maalin kasta
6 Abaabul iyo dhiirigelin
Cunista caafimaad qabta waa furayaasha waaweyn ee aan ku raaxeysaneyno maskax caafimaad qabta. In kasta oo aysan u ekaan karin, caafimaadka jidhka ayaa maskaxdeena wax badan ku yeesha oo taa lidkeed. Taasi waa sababta aan u daryeeli lahayn nafteenna gudaha iyo dibaddaba. Aad ayey muhiim u tahay si fiican wax u cun si aad u dareento ladnaan iyo in la daryeelo jirka mustaqbalka fog. Cunnadu waa inay ahaataa mid isku dheelitiran, oo leh dhammaan noocyada nafaqooyinka, iyadoo laga fogaanayo dufanka buuxa iyo sokorta ee dhaawici kara caafimaadkeenna. Haddii aan si fiican wax u cunno waxaan la yeelan doonnaa xiriir caafimaad oo xagga cuntada ah waxaanna iska ilaalin doonnaa cayilnaan badan iyo dhammaan dhibaatooyinka caafimaad ee cunno xumo ay la imaan karto. Cun miraha iyo khudaarta maalin kasta cab biyo badan waxaadna dareemi doontaa ladnaanta jirkaaga si dabiici ah.
Daryeelka jirku waa qayb kale oo muhiim ah. Cunnadu aad ayey muhiim u tahay, laakiin sidoo kale sameynta isboorti si ay nooga dhigto kacdoon, dhalinyaro iyo caafimaad. Ku isboortigu wuxuu xoojiyaa murqaha iyo lafaha, hoos u dhigida hawsha gabowga iyo ka caawinta dhaqdhaqaaqa. Kaliya nama caawinayso jir ahaan, laakiin sidoo kale waxay naga caawineysaa horumarinta maskaxda oo aan ka dhigno mid wanaagsan, maaddaama sameynta isboortiga ay naga caawineyso sii deynta endorfinyada iyo hormoonnada kale ee hagaajiya nidaamkayaga oo dhan, oo ay ku jiraan nidaamka difaaca jirka.
Lahaanshaha saaxiibo waa qayb muhiim ah oo leh maskax caafimaad qabta. Saaxiibbadu waa qoyska aad doorato oo hadday fiican yihiin weligood taageero ayaan ku lahaan doonnaa iyaga. Laakiin saaxiibtinimada waa in aan loo qaadan fudeyd, waa in sidoo kale la daryeelaa. La joog cid walboo wax kuu kordhineysa iyo kuwa muhiimka kuu ah. Haddii aad tahay iyo inaad tahay qof bulsheed, waa lama huraan inaad yeelato saaxiibo wanaagsan.
Maalmahan waxaan diiradda saareynaa dhammaan howlaha ay tahay inaan fulino annaga oo aan tixgelin siin waqtiga firaaqada. Marar badan ayaan ilaawnaa maalin uun waqti firaaqo ah nafteena, nasasho ama inaan sameyno waxa aan jecel nahay. Marka taasi waa inay muqadas tahay. Maalin kasta waa inuu helaa nasashadiisa maxaa yeelay haddii aynaan is daryeelin ma awoodi doonno inaan daryeelno dad kale ama kuma wanaagsanaano xagga caafimaadka maskaxda.
Samee wax aad jeceshahay maalin kasta
Waa inaan sameynaa wax aan jecelnahay maalin kasta. Tani runtii waa qayb lagama maarmaan ah maxaa yeelay hiwaayadaha iyo wakhtiga firaaqada waxay ka dhigayaan heerarka walaaca inay hoos u dhacaan waxaanan dareemaynaa fiicnaan Haddii saacaduhu kaa gudbaan si dhakhso leh wax, waa taas hubaal waad ka heshay waana ku raaxeysaneysaa. Taasi waa sababta ay tahay inaad sidan oo kale u sameyso maalin kasta.
Abaabul iyo dhiirigelin
Waa muhiim in nolosheena tahay sidoo kale abaabulay iyo inaan leenahay yoolal iyo dhiirigelin. Way fududahay inaad dareento raaxo iyo ladnaan haddii aan leenahay nolol abaabulan, maadaama habkan aan sidoo kale uga faa'iideysan karno waqtigeenna si aad u wanaagsan. Dhanka kale, waa lagama maarmaan in la helo dhiirigelin, maxaa yeelay waxay naga caawinayaan inaan maalin walba kacno oo aan yeelano awood aan ku gaarnno yoolalka aan higsaneyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Sida loo daryeelo caafimaadkaaga maskaxda maalin kasta